GVim: graphical vhezheni yeakakurumbira vim zvinyorwa edhita | Linux Vakapindwa muropa
vim (vi yakavandudzwa) yaive yakavandudzwa vhezheni yevi zvinyorwa zvemupepeti izvo zvaivepo pane UNIX masystem. Ichi chinyorwa chemugadziri ndechimwe chezvinodiwa zvevashandisi vazhinji uye vanogadzira, yega yega ine zvikonzero zvavo, kunyangwe ichiri nyaya ine gakava inogadzira gakava pakati pevaya vanosarudza izvi kana vamwe (vim, vi, emacs, nano, gedit,. ..). Zvisinei neizvi, uye pasina kupinda muhondo iri nani, GVim chirongwa icho chatine hanya nacho muchinyorwa chino.
GVim ndeye Vim-based chinyorwa chinyorwa, asi izvo zvinoshandisa GUI, kuti iwe ugone kuibata nenzira yakati wandei uye yakapusa nzira kune avo vasingawirirane zvakanyanya neCLI. Uye zvakare, iri yemahara, yakavhurwa sosi, pasi peGNU GPL rezinesi, uye inowanikwa nyore munzvimbo yepamutemo repos yekugovera.
Ini ndinogara ndichizvidzokorora, asi ndinozviita zvakare: hapana zvirinani uye zvakaipisisa software mune zvimwe zviitiko. Iyo yakanakisa ndeye iyo iwe yaunoziva kubata nayo nehukuru hwehunyanzvi uye iwe unonzwa wakasununguka nazvo.
Iyi graphical interface-yakavakirwa zvinyorwa edhita inoshanda nekuda kwe GTK maraibhurari (kunyangwe ichigona zvakare kuiswa mune mamwe maQt-akavakirwa nharaunda pasina dambudziko sekureba sekugutsikana kugutsikana) iwe waunoshandisa kune yako hwindo. Uye zvakare, inochengetedza epakutanga maVim mashandiro, pamusoro pekuwedzera mamenyu mune ino graphical nharaunda iyo ichaita kuti hupenyu hwako huve nyore kushanda kunze kwekoni.
Kana zviri zvakanakira, kunze kwekuve neyakajeka nharaunda iyo inodzivirira kushanda kubva kuchiteshi, ine zvakare ine zvimwe zvinonakidza hunhu. Semuenzaniso, haisi inorema mupepeti, uye haina kusanganisira a kudzidza munyonga yakaoma kuvashandisi vachangotanga kuishandisa seye mupepeti zvinoenderana nemirairo mameseji enzvimbo angave.
Kune zvimwe zvese, unogona ita saizvozvo Iwe ungaitei neako vim, ndiko kuti, gadzirisa yako ekumisikidza mafaera, zvinyorwa, kana sosi kodhi pane kuda ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » GVim: graphical vhezheni yeakakurumbira vim zvinyorwa edhita